Hello Nepal News » वर्ष २०१९ : रोनाल्डो र मेस्सीमा को अघि ?
वर्ष २०१९ : रोनाल्डो र मेस्सीमा को अघि ?
विश्व फुटबलमा स्पेनिस बार्सिलोनाका लिओनल मेस्सी र इटालियन युभेन्टसका क्रिस्टियानो रोनाल्डोबीच चर्को प्रतिस्पर्धा छ । अहिले रोनाल्डो फरक लिगमा भए पनि यी दुई खेलाडीको प्रतिस्पर्धा कुनै न कुनै रूपमा अहिले पनि छँदैछ ।
वर्ष २०१९ मा रोनाल्डो र मेस्सीको व्यक्तिगत प्रदर्शन र गोल संख्याबारे यहाँ चर्चा गरिको छ । बार्सिलोनाका मेस्सीले विगत वर्षझैं गोल संख्यामा यस वर्ष पनि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि पाए । उनले २०१९ सकिँदा देश र क्लबबाट गरी कूल ५० गोल पूरा गरे । यससँगै मेस्सीले करिअरमा नवौंपटक सिंगल क्यालेन्डरमा ५० गोल पूरा गरे ।
तर, रियल मड्रिड छाडेर युभेन्टस पुगेका रोनाल्डोको गोल संख्या विगत वर्षभन्दा खस्कियो । उनले यस वर्षमा देश र क्लबबाट गरी कूल ३९ गोल पूरा गरे । उनी ४० गोलबाट १ गोलले पछि परे ।
उमेरका हिसाबले ३४ वर्षका रोनाल्डोका लागि ३९ गोल निकै शानदार तथ्यांक हो । त्यसै पनि इटालियन लिग युरोपकै सबैभन्दा डिफेन्सिभ लिग मानिने हुँदा इटालीमा उनले गरेको गोल संख्यालाई शानदार मान्न सकिन्छ । नयाँ लिगमा गएर खेल्न सुरुआती समयमा जो कोहीलाई सजिलो हुँदैन ।
यता, मेस्सीले १६ वर्षदेखि लगातार बार्सिलोनाबाटै खेलिरहेकाले उनलाई गोल गर्न सजिलो हुने भइहाल्यो । उमेरका हिसाबले पनि मेस्सी रोनाल्डोभन्दा दुई वर्ष कान्छा छन् । यो वर्ष सकिँदा मेस्सीले रोनाल्डोलाई कूल गोल संख्यामा मात्रै ११ गोलले पछि छाडे । त्यसो त मेस्सीले रोनाल्डोको भन्दा १० खेल बढी खेलेर ११ गोल बढी गरेका हुन् ।
अंकमा हेरौं (देश र क्लब)
मेस्सी कूल गोल संख्या – ५०
रोनाल्डो कूल गोल संख्या – ३९
मेस्सी कूल खेल संख्या – ५८
रोनाल्डो कूल खेल संख्या – ४८
मेस्सीको गोल – बार्सिलोना–४५, अर्जेन्टिना–५
रोनाल्डो गोल – युभेन्टस–२५, पोर्चुगल १४
प्रकाशित मिति १५ पुष २०७६, मंगलवार ०४:०९